'တာတူး' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ ဝတ်စားပုံကို အေးသောင်းနဲ့ လုလုအောင်တို့ ပုံစံမျိုး အတုခိုးထား? - Yangon Media Group
ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု အများအပြားရရှိထားသော ‘တာတူး’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ် ဆောင် နေတိုးနှင့်တွေ့ဆုံကာ ယခုလိုပဲမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး – ‘တာတူး’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဘယ်လိုကြောင့် လက်ခံဖြစ်တာလဲ။
ဖြေ – ‘တာတူး’ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့အတွက် ဒါရိုက်တာက စပြောလာကတည်းက ဇာတ်လမ်းလေးကို စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ ရိုက်ဖို့အတွက် တစ်ထိုင်တည်း ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာ တစ်ကားအပါအဝင်ပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနဲ့ ဇာတ်လမ်းပုံစံက ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အ ကြောင်းအရာလေးပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာက တာတူး မိန်းကလေးလို ပြင်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းက ပရိသတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက် ဖြစ်နေမယ်လို့လည်းထင်တယ်။
မေး- ဇာတ်ကောင်ကာရိုက်တာ ပီ ပြင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြော ပြပေးပါဦး။
ဖြေ – ဇာတ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ပံ့ပိုး နိုင်အောင်လို့တော့အများကြီးပြင် ဆင်ခဲ့ရတယ်။ ဇာတ်ကောင်ပီပြင်ဖို့အတွက် ပံ့ပိုးရတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ သရုပ် ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်း အပီပြင်ဆုံးဖြစ်အောင် သရုပ် ဆောင်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မိန်းက လေးအနေနဲ့ Sexy ပုံစံမျိုးဝတ်တဲ့ ပုံစံတွေက ညီမလေးလုလုအောင် ပုံစံကိုအတုခိုးထားတယ်။ နောက် ဝမ်းဆက်ဝတ်ဆင်တဲ့ပုံစံကကျ တော့ အေးသောင်းပုံစံ။ ဒီနှစ်ခုကို အတုခိုးပြီးတော့ ဒီကာရိုက်တာ တွေကို တည်ဆောက်ထားတာပါ။
မေး – မိန်းကလေးကာရိုက်တာမျိုး အရင်ကလည်းသရုပ်ဆောင်ဖူးတယ်ဆိုတော့ ဒီတာတူး ကာရိုက်တာက အရင်ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ကာ ရိုက်တာတွေနဲ့ ဘာတွေ ကွာခြားသွားမလဲ။
ဖြေ – အရင်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ အခု တာတူးဇာတ်ကားက မတူဘူး။ တခြားစီပါပဲ။ကာရိုက်တာတွေမတူသလို စိတ်ခံစားမှုတွေ ဖြစ်တည်တဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေလည်း မတူပါဘူး။ မာမီရှိန်းဇာတ်ကောင်နဲ့ တာတေကြီး ဇာတ်ကောင်ကမတူသလို အဲဒီဇာတ်ကောင်နှစ်ခုနဲ့ တာတူးကလည်း မတူပါဘူး။
မေး- ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေရင်း နဲ့ အခက်အခဲတွေရော ရှိခဲ့သေး လား။
ဖြေ- အခက်အခဲကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ရှေ့က ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ တဲ့ ဒရာမာဇာတ်ကားတွေမှာလည်း အခက်အခဲတွေ အများကြီးကြုံ တွေ့ခဲ့ရတာပါပဲ။ အခက်အခဲဆိုတာရှိနေမှပဲ ပရိသတ်ကြည့်ရတာ အချိန်ပေးရတာ တန်မှာပေါ့နော်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပြီးဆုံးသွား တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း အားမရဘူး။ အဲဒါမျိုးကို ပရိသတ်ကိုလည်း ချမပြချင်ဘူး။
မေး- ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ LGBT အသိုင်းအဝိုင်းကနေပြီးတော့ LGBT တွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ဇာတ် ကားရိုက်ကူးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ကန့်ကွက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ ‘တာတူး’ ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘာများ ပြောချင်လဲ။
ဖြေ- ဒီဇာတ်ကားက ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ လှောင် ပြောင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ထိခိုက် စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်း ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန် တော်က အဲဒီလိုပြောလို့ ကိုယ်ဖန်တီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ကာရိုက်တာ၊ ဇာတ်ကားမို့လိုဆိုပြီးတော့ ဒီလို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကား ရဲ့တန်ဖိုးကို ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သိမှာပါ။
မေး – လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ဘာဇာတ်ကား တွေ ရိုက်ကူးဖို့လက်ခံထားလဲ။
ဖြေ – ဒီလထဲမှာပဲ Box .No ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ တော့ သတင်းမီဒီယာသမားတစ် ယောက်ရဲ့ ကာရိုက်တာပါ။
မေး – သတင်းထောက်ဇာတ် ကောင်ကို ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ထားလဲ။
ဖြေ – သတင်းထောက်ကာရိုက်တာ ဇာတ်ဝင်ခန်းကတော့ နည်းမယ်။ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ရဲ့ ကာရိုက်တာပုံစံက ဇာတ်လမ်းမှာ ပိုများမှာပါ။ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းက တော့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံတွေကိုလည်း အများကြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားတယ်။ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုပုံစံ၊ အလုပ်လုပ်တဲ့အနေအထား၊ သူ့တို့ရဲ့ဘဝတွေကို အကြမ်းအားဖြင့်တော့ တော်တော်လေး တော့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တင်ပြ မှုပုံစံကိုလည်း ဆန်းသစ်ထားတယ်။ နောက် ကျွန်တော်နဲ့ မီဒီယာသမားတွေ သတင်းသမားတွေဆိုတာက အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန် တော့်အတွက်တော့ ဒီလိုကာရိုက်တာမျိုး ရိုက်ကူးတာလည်းမရှိသေး ပါဘူး။
ဝဥကို ပြည်ပမှ ဝယ်ယူမှု များပြားလာခြင်းကြောင့် ဝဥဈေးနှုန်းမြင့်တက်ကာ ယခုနှစ်တွင် ဝဥပိဿာချိန
'ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ ဘီလူး' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆံပင်ပုံစံကို အဓိကထားပြီးတော့ ပြင်ဆင်ထ??
ဂိုးများ သွင်းယူရန် ပီယာတက်ခ် ရှင်သန်နေခြင်းဟု ဂတ်တူဆို ချီးကျူး